Olee Otú Ndị Nne na Nna Ga-esi Akụziri Ụmụ Ha Banyere Mmekọ Nwoke na Nwaanyị? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Lingala Lithuanian Luganda Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndau Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee ndị kwesịrị ịkụziri ụmụaka gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị? Baịbụl sịrị na ọ bụ ọrụ dịịrị ndị nne na nna. E nwere ihe ụfọdụ nyeerela ọtụtụ ndị nne na nna aka. Lee ha:
Emela ihere. Baịbụl ezoghị ọnụ mgbe ọ na-ekwu ihe ụfọdụ gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị nakwa gbasara ihe mmadụ ji bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Chineke gwakwara ụmụ Izrel na e kwesịrị ịkụziri “ụmụntakịrị” ihe ndị ahụ. (Diuterọnọmi 31:12; Levitikọs 15:2, 16-19) Ị na-akọwara nwa gị banyere mmekọ nwoke na nwaanyị, kọwaa ya otú ọ na-agaghị eche na ọ bụ ihe ihere ma ọ bụ chee na ihe mmadụ ji bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị bụ ihe ihere.
Ka ọ na-eto, na-akọwakwuru ya ihe ndị ọzọ o kwesịrị ịma. Kama iji ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị kọjuo nwa gị isi otu ugbo, ọ ka mma ka ị na-akọwara ya ihe onye dị afọ ole ọ dị ga-aghọtali. Ọ na-eto, gị ana-akọwakwuru ya ihe ndị ọzọ.—1 Ndị Kọrịnt 13:11.
Kụziere nwa gị ịna-akpa àgwà ọma. E nwere ụlọ akwụkwọ ụfọdụ a na-akụziri ụmụaka ihe ndị ha kwesịrị ịma gbasara mmekọahụ. Ma, Baịbụl gwara ndị nne na nna ka ha na-akụziri ụmụ ha ihe gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị na-akụzikwara ha otú ha kwesịrị isi na-ele mmekọ nwoke na nwaanyị anya nakwa otú ha ga-esi na-emeso onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ha.—Ilu 5:1-23.
Gee nwa gị ntị. Ọ bụrụ na nwa gị ajụọ gị gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị, ewerela ya na nwa gị emebiela. Kama bụrụ “onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa.”—Jems 1:19.
Otú ị ga-esi echebe ụmụ gị ka ndị na-edina ụmụaka ghara inweta ha
Kụziere ụmụ gị ka ha ghara ikwe ka onye ọ bụla dinaa ha
Mara ihe ndị i kwesịrị ịma. Mata otú ndị na-edina ụmụaka na-esi enweta ha.—Ilu 18:15; gụọ isi nke 32 n’akwụkwọ Ajụjụ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ—Azịza Ndị Na-adị Irè, Nke 1.
Mara ihe na-eme ná ndụ nwa gị. Akpọnyela mmadụ nwa gị ma ọ bụrụ na ị tụkwasịghị ya obi. Ahapụkwala nwa gị ka “ọ na-eme otú masịrị ya.”—Ilu 29:15.
Kụziere nwa gị na ọ bụghị ihe ọ bụla onye tọrọ ya gwara ya ka ọ ga-eme. E kwesịrị ịkụziri ụmụaka ka ha na-erubere ndị mụrụ ha isi. (Ndị Kọlọsi 3:20) Ma, ọ bụrụ na ị kụziere nwa gị ka ọ na-eme ihe ọ bụla onye toro eto gwara ya, o nwere ike ime ka nwa ahụ banye ná nsogbu. Ndị nne na nna bụ́ Ndị Kraịst nwere ike ịgwa nwa ha na ọ bụrụ na mmadụ agwa ya mee ihe Chineke kpọrọ asị, ya emela ya.—Ọrụ Ndịozi 5:29.
Kụziere ụmụ gị ihe ndị ha nwere ike ime. Kụziere nwa gị ihe ọ ga-eme ma mmadụ chọọ ịrata ya ma ọ bụ mee ya ihe ọ bụla mgbe ị na-anọghị ya. Ọ bụrụ na gị na ụmụ gị amụgharịa ihe ha ga-eme, ọ ga-enyere ha aka ịkata obi sị onye ọ bụla chọrọ ime ha ihe na-adịghị mma “Hapụ m! Ihe ọ bụla i mere m, m ga-agwa ya mpa m! Gwakwa ha ka si ebe ahụ gbapụ ozugbo. Ọ ga-adị mma ị nọtụ gị echetakwara ha ihe ndị ị kụziiri ha n’ihi na ọ naghị ara ahụ́ ụmụaka echefuo ihe a kụziiri ha.—Diuterọnọmi 6:7.
Kụziere Ụmụ Gị Omume Ọma
Ụmụ gị hà ma nke bụ́ eziokwu gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị? Gụọ ihe a ka ị mata ihe Chineke kwuru gbasara ya nakwa ihe i nwere ike ịgwa ụmụ gị.
Nyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Mata Mgbanwe Ndị A Na-enwe n’Ahụ́